स्वादिष्ट cheesecakes: एक सरल मिठाई नुस्खा
स्वादिष्ट पनीर केक, को नुस्खा तल छलफल गरिनेछ जो, पेश र नास्ता रूपमा र प्रकाश भोजन वा खाना पछि नियमित मिठाई रूपमा हुन सक्छ। यो कि यस्तो मीठा पकवान आश्चर्यजनक सजिलो र छिटो छ उल्लेख गर्नुपर्छ। साथै, यस मिठाई तयार उहाँलाई लागि उपलब्ध र सरल सामाग्री भएकोले महंगा उत्पादनहरु किन्न कुनै आवश्यकता छ।
स्वादिष्ट cheesecakes: एक नुस्खा एक तस्बिर
पकवान लागि सामाग्री:
देहाती curd (प्राथमिकताको भद्दा) - 400 ग;।
ठूलो अन्डा - 1 पीसी;।
बालुवा चीनी -3पूर्ण ठूलो चम्चा;
सूजी -3पूर्ण ठूलो चम्चा;
कुनै पनि प्रकारको गहुँको पीठो - आफ्नो रुचि अनुसार;
सूर्यमुखी तेल - एउटा सानो रकम (cheesecakes frying लागि)।
मिठाई लागि आधार तयार प्रक्रिया
स्वादिष्ट cheesecake नुस्खा आश्चर्यजनक सरल छ, मीठो curd मिश्रण आधारमा संग गर्न थालेका गर्नुपर्छ। यो गर्न, एक ठूलो कचौरा लिन र फिर्ता राख्न 400 ग्राम। भद्दा देहाती घरेलु।3चमचा ठूलो चिनी र सूजी को नै रकम को पूर्ण खन्याउन एक डेयरी उत्पादन अर्को आवश्यक छ। सबै सामाग्री एक चम्चा संग मिश्रित गर्नुपर्छ। यो तपाईं एक sweeter मिठाई रुचि भने, अनुरूप थोक सामाग्री को राशि अलिकति वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ।
को स्वादिष्ट गर्न पनीर केक, को नुस्खा हामी यस लेखमा विचार जो, यो patties मा गठन गर्न सजिलो, मिठाई curd आधार कम्तिमा 1 ठूलो अन्डा थप्न सिफारिस गरिएको छ छ। उत्पादनहरु whisk गर्न र पूर्ण पग्लियो छ तर्फ चीनी सेट र एक सानो सुन्निएको सूजी चाहिन्छ भनेर पछि।
पनि स्वादिष्ट cheesecakes नुस्खा गहुँको पीठो एउटा सानो रकम को प्रयोग पनि समावेश छ। त्यो अत्यन्त पातलो बाहिर गरिएका र patties मा गठन गर्न सकिन्छ भने यो आधार गर्न थप गर्न सकिन्छ। त्यस अवस्थामा मा, यदि सूजी राम्रो cheesecakes लागि आवश्यक छ कि घरेलु पनिर आटा स्थिरता मा swelled र परिवर्तन, आटा मात्र obvalivaniya semis लागि प्रयोग गर्नुपर्छ।
समाप्त आधार 7-8 सेमी को एक ससेज रोल व्यास आवश्यक छ, र त्यसपछि अधिक 250 भन्दा मिलिमिटरमा एक मोटाई को राउन्ड स्लाइस यसलाई काटे। त्यसपछि, प्रत्येक अर्द्ध-समाप्त उत्पादन गहुँको पीठो मा 2-साइड रोल आवश्यक छ।
स्वादिष्ट cheesecakes: को नुस्खा एक कराइ मा
मिठाई को लागि, बरस रही आवश्यक छ, एउटा ठूलो कराइ लिन सूर्यमुखी तेल, र धेरै तातो यसलाई माझ छ। कि पछि, भाँडा को सतह तपाईंले केही खाली प्रकाशित गर्न चाहनुहुन्छ, तर त्यसैले तिनीहरू प्रत्येक अन्य स्पर्श छैन भनेर। cheesecakes तल्लो भाग हल्कासित browned गर्दा तिनीहरूले बेल्चा बारी गर्नुपर्छ।
सबै तला cheesecakes एक खोक्रो पकवान राख्नु र तातो सेवा गर्नुपर्छ। यस मिठाई कफी, चिया वा कोका उद्धार गर्न सिफारिस गरिएको। यो कि टिप्पण लायक छ curd पनीर केक तिनीहरूले जाम, मह वा जाम साथ सँगै प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने धेरै tastier बाहिर बारी।
उज़्बेक manti: नुस्खा
स्वादिष्ट जाडो भोजन: adjika ककडी
प्यानकेकहरू पकने: पानी, दूध, kefir लागि निर्धारण
Doughs। खमीर र Puff केक को प्रकार
कसरी एक आमलेट तयार गर्ने केही सुझावहरू
"Skyrim" जस्तै कोड प्रविष्ट गर्न? "Skyrim" मा कोड
Multivarka "पोलरिस" मा दलिया - दायाँ खान
Minecraft मा एक टाँसिएको पिस्टन कसरी बनाउने र तिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने?
दोष छ जो - बच्चा को किंडरगार्टन बाँकी? कसले किंडरगार्टन मा बच्चाहरु को लागि जिम्मेवार छ?
पाँच thousandth बिल: को को प्रामाणिकता कसरी पहिचान गर्न
नयाँ सेडान को समीक्षा "टोयोटा Avalon" 2013
एक आर्थिक स्रोत रूपमा Entrepreneurial क्षमता। entrepreneurial कौशल को कारक
धेरै Housewives को चासो, "किन पात पहेंलो को गेरानियम मा बारी गर्छन्?"
"Multitroniks TC 750": समीक्षा, प्रयोगकर्ता पुस्तिका
711 विफलता (त्रुटि) समाधान कसरी गर्ने?
विभिन्न देशहरूमा बच्चाको जन्मदिन मनाउन?
यो आदिम कम्युनल प्रणाली र यसको विशेषताहरु